Onweghi ihe ozo bu Knutby
Ebe ọ bụ na anyị na-ejide ndị nkịtị aka, anyị ekwesịghị inye ike anyị na ike anyị maka ndị ụgha.
Edemede kachasị agụ nke ụbọchị Sọnde, June 28, 2020. Foto: ụbọchị.
Arụmụka ahụ ga-ebute naanị ọgba aghara na akara ajụjụ karịa isi okwu mkparịta ụka. Kama, anyị kwesịrị itinye ume na ume anyị n’ime inye ụwa Jizọs Kraịst.
Arụmụka arụmụka na Knutby
Newspaperbọchị akwụkwọ akụkọ Christian ụbọchị a nwere ọtụtụ edemede na arụmụka banyere ihe mere na Knutby na ihe kpatara nke a.
Edemede kachasị gụọ "taa" bụ isiokwu arụmụka banyere Knutby nke ndị edemede dị iche iche dere.
Mana gịnị kpatara mmadụ ji tinye ume na ume ya na nke a? Arụmụka ahụ ga-ebute naanị ọgba aghara na akara ajụjụ karịa isi okwu mkparịta ụka.
Kama, anyị kwesịrị itinye ume na ume anyị n’ime inye ụwa Jizọs Kraịst.
Anyị ga-agwụ ike, ọ nweghịkwa akara a ga-edezi ma ọ bụrụ na anyị anaghị arụ ọrụ na-akpọghị anyị.
Vecka 30, måndag 26 juli 2021 kl. 03:46